बंगलादेशमा फ्रान्सविरुद्ध विशाल प्रदर्शन, शिक्षकको टाउको काटियो - Janadesh Khabar
बंगलादेशमा फ्रान्सविरुद्ध विशाल प्रदर्शन, शिक्षकको टाउको काटियो
फ्रान्समा बनेको सामान बहिष्कार गर्ने मागको समर्थनमा बंगलादेशमा हजारौं मानिसले राजधानी ढाकामा प्रदर्शन गरेका छन्।
फ्रान्सले इस्लामिक अतिवादविरुद्ध कडा नीति लिएपछि इस्लामिक देशहरुले कडा प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन्। ढाकामा प्रदर्शनकारीले फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुयल म्याक्रोको पुत्ला जलाएका छन्।
म्याक्रोले फ्रान्सको पत्रिका सार्ली एब्डोमा छापिएको पैगम्बर मोहम्मदमाथिको कार्टुनको समर्थन गरेका थिए। यही सन्दर्भमा इस्लामिक देशहरूले निरन्तर विरोध जनाउँदै आएका छन्। ढाकामा प्रदर्शनकारीहरु फ्रान्सेली दूतावासतर्फ अघि बढ्दै गर्दा प्रहरीले रोकेको थियो।
म्याक्रोले फ्रान्स धर्मनिरपेक्ष देश भएको बताए पनि उनीमाथि थुप्रै इस्लामिक देश खनिएका छन्। अक्टोबर महिनाको आरम्भमा कार्टुनकै विषयलाई लिएर एक शिक्षकको टाउको काटिएको थियो। ती शिक्षकको श्रद्धान्जली दिने क्रममा राष्ट्रपति म्याक्रोले कार्टुनको मामिलामा आफू नझुक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
सोमबार टर्कीका राष्ट्रपति रेचेम तैय अर्दोआनले पनि फ्रान्सेली सामान बहिष्कारको अपिल गरेका थिए। अर्दोआनले टेलिभिजनमा भनेका थिए, ‘‘जसरी दोस्रो विश्वयुद्धपछि यहुदीलाई निशाना बनाइयो, उसैगरी अहिले मुसलमानविरुद्ध अभियान चलाइएको छ। फ्रान्सका राष्ट्रपतिले गरेको घृणा बढाउने कार्य रोक्न युरोपियन मुलुकका नेताहरुले उनलाई दबाब दिनुपर्छ।’’
युरोपियन मुलुकहरूले फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रोको समर्थन गर्दै आएका छन् र अर्दोआनको निन्दा गरेका छन्। अर्दोआनले शनिबार फ्रान्सका राष्ट्रपतिको तिखो आलोचना गर्दै भनेका थिए, ‘‘म्याक्रोको मानसिक उपचार गर्नु आवश्यक छ।’’ अर्दोआनले फ्रान्सस्थित आफ्नो देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने घोषणा गरेका छन्।
ढाकामा के भयो ?
प्रहरीको अनुमान अनुसार ढाकामा भएको फ्रान्सविरोधी जुलुसमा कम्तीमा ४० हजार मानिस सहभागी थिए। प्रदर्शनको आयोजना इस्लामी आन्दोलन बंगलादेशले गरेको थियो। यसलाई बंगलादशको इस्लामिक पार्टीमध्ये ठूलो मानिन्छ। प्रदर्शनमा फ्रान्सेली सामानको बहिष्कार तथा राष्ट्रपति म्याक्रोलाई सजाय दिनुपर्ने माग गरिएको थियो।
इस्लामी आन्दोलनका नेता अताउर रहमान म्याक्रोप्रति निकै आक्रोशित थिए। उनले बंगलादेशस्थित फ्रान्सेली राजदूतलाई फिर्ता गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका थिए। अर्का एक नेताले फ्रान्स मुसलमानको दुश्मन भएके टिप्पणी गरेका थिए।
भारतमा रहेकी बंगलादेशी निर्वासित लेखक तसलिमा नसरिनले ढाकामा आयोजित प्रदर्शनीको तस्वीर ट्वीट गर्दै भनेकी छन्, ‘‘बंगलादेशका केही उन्मादी मानिसहरू पैगम्बर मोहम्मदको कार्टुनको विषयलाई लिएर फ्रान्सेली सामान बहिष्कारको नारा लगाइरहेका छन्। तर, तिनीहरू बंगलादेशमा कायम बलात्कार, हत्या, भ्रष्टाचार गरिबी तथा अन्यायबारे सडकमा कहिल्यै उत्रँदैनन्। यिनीहरु चिनियाँ सामान बहिष्कार गर्न सक्दैनन्, चीनमा मस्जिद तोडर शौचालय बनाइँदै छ। इस्लाम कुनै धर्म होइन, यो राजनीति मात्रै हो।’’
इन्डानेसिया, बंगलादेश, इराक तथा मौरिटानियामा अहिले फ्रान्सविरोधी प्रदर्शन भइरहेको छ। फ्रान्सले ती देशहरुमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित बस्न अनुरोध गरेको छ।
फ्रान्सको विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता तथा घृणा रोक्नका लागि फ्रान्सले खेलेको भूमिकालाई गलत ढंगले प्रस्तुत गरिँदै छ। राष्ट्रपति म्याक्रोको भनाइलाई गलत रुपमा राजनीतिक फाइदाका निम्ति उपयोग गरिएको छ। फ्रान्सेली सामान बहिष्कारको अपिल अर्थहीन छ, यसलाई तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ।’’
किन टाउको काटियो शिक्षकको ?
फ्रान्सका शिक्षक स्यामुयल पेचीको टाउको १८ वर्षका अब्दुल्लाख अन्जोरोभले अक्टोबर १६का दिन काटिदिएका थिए। स्यामुयलले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विषयमा पढाउँदै आफ्नो कक्षामा पैगम्बर मोहम्मदको कार्टुन देखाएका थिए।
ती शिक्षकको हत्या त्यसबखत गरियो, जुनबेला व्यंग्यप्रधान फ्रान्सेली पत्रिका सार्ली एब्डोको कार्यालयमा २०१५ को हमलाबारे जाँच प्रक्रिया चलिरहेको थियो।
स्यामुयलको हत्याको विरोधमा फ्रान्समा मानिसहरु सडकमा उत्रिएका थिए। पछिल्लो साता फ्रान्सका दुई सहरको टाउनहलमा स्यामुयलमाथि श्रद्धान्जली दिने क्रममा उनको तस्बिरसँगै पैगम्बरको कार्टुन पनि राखिएको थियो।
एक समारोहमा राष्ट्रपति म्याक्रोले स्यामुयलको तारिफ गर्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा आफ्नो लडाइँ जारी रहने संकल्प गरेका थिए। उनले स्यामुयललाई सो लडाइँको एक अनुहार बताएका थिए।
बंगलादेश र फ्रान्सबीचको सम्बन्ध निकै राम्रो छ। बंगलादेशमा उत्पादित सामान बढीमात्रामा फ्रान्स निर्यात हुँदै आएको छ, खासगरी गार्मेन्ट उत्पादन।
गत वर्ष बंगलादेशबाट फ्रान्सतर्फ १.७ अर्ब डलरबराबरको निर्यात भएको थियो। फ्रान्सेली कम्पनीहरुले बंगलादेशमा सिमेन्ट, ऊर्जा तथा टेलिकम क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेका छन्।
बंगलादेश सरकारले पछिल्ला घटनाक्रमबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। बंगलादेशको सबैभन्दा ठूलो इस्लामिक संगठन जमात इस्लामीले पनि विरोध प्रदर्शनमा भाग लिएको छैन।
पार्टीका एकजना वरिष्ठ नेताले फ्रान्सेली राष्ट्रपतिको भनाइ दुर्भाग्यपूर्ण रहेको टिप्पणी गरे पनि फ्रान्समा निर्मित सामान बहिष्कारको मागको समर्थन गर्न नसक्ने बताएका छन्।
१२ कात्तिक २०७७, बुधवार १३:२४ बजे प्रकाशित
मुकेश हत्या प्रकरण : जाहेरीबाट नेताको नाम हटाउन प्रहरीको दबाब
जसपा पार्टीले तोक्यो लेवी, कसले कति तिर्नुपर्छ ?